တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကံ့ကော်ပွင့်ချိန် ...
Posted by မေဓာဝီ at 1:51 AM
စကာင်္ပူမှာလည်း ကံ့ကော်တွေစိုက်ထားတဲ့လမ်းရှိတယ် ပွင့်မပွင့်သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်၊
3/13/2011 2:50 AM
3/13/2011 3:10 AM
တို့လဲ ဒီတစ်ခေါက် ကံကော်ပင်တစ်ပင် ငါးရာ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ခဲ့တယ် စိုက်ဘို့မှာထားခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ပင် ကို နစ်ရာနဲ့ပေးတာမယူခဲ့မိတာ နောင်တရမဆုံးဘူး နောက်တစ်ခါ ထပ်ဝယ်ဦးမယ်။ ဖောင်ကြီးမှာ.ကန့်ကော်ပင်ရှိတယ။်
3/13/2011 3:14 AM
ပန်းလေးတွေ လှလိုက်တာ ခံစားနားလည်မိတယ်။
3/13/2011 3:17 AM
3/13/2011 3:18 AM
3/13/2011 3:19 AM
အခုအိမ်ပုံက ဘိလပ်က အိမ်ပုံလား ချစ်စရာလေး. steve က အပင်ပန်းကို မသိဘူးတဲ့။
3/13/2011 3:20 AM
လွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်တာကို လိုချင်တတ်တဲ့ one of the လူ့သဘောတစ်ခုလဲပါပါတယ် အခု ဘိလပ်ကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိသားစုက ပြန်ခေါ်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ကို ပြန်ရတော့မယ်လို့တွေးကြည့်ပါလား ဘိလပ်ကို လွမ်းသလိုလိုဖြစ်လာမယ်။ တို့ရန်ကုန်အပြီးပြန်ရတော့မလာား မသိ ဆိုတဲ့အချိန်က စလုံး မလေးရှားကို လွမ်းမိသလိုဘဲ နောက်ပြန်မဆုံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး.
လွမ်းတာကတောကလွမ်းပါ လွမ်းလို့ရပါတယ် တို့ အတွေးကို ပြောပြတာပါ။
3/13/2011 3:37 AM
anomynous တေါ လုပ်ဘို့မေ့သွားတယ် ကွန်မက်တွေ ဖျက်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုမှသဘောမထားဘူး တို့ ကြေ့ပာလိုက်ရရင်ပြီးရော.မေဓါဝီ သမင်မလေး ဖ တ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပြီးရော.
3/13/2011 3:39 AM
ကံကော်ရွှေပြည် ဆိုလို့..၁၀ တန်းတုန်းက..တမမ လုပ်ခဲ့ရတဲ့..အထူးထုပ် ကြီးတောင် သတိရသွားတယ်..မမေ..း)
ကံ့ကော် နဲ့.. ခွဲမရ ပါလေ
3/13/2011 4:28 AM
အမခင်ဦးမေက ကွန်မန့်တွေ အလှူကြီးလာပေးသွားတာကိုး ... ပို့စ်တင်ပြီးတာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားလို့ မနက်မိုးလင်းမှ ကွန်မန့်တွေ တင်လိုက်ရတာပါ။ အနောနိမတ် မလုပ်လို့ မတင်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး အမ။
ဓာတ်ပုံထဲက အိမ်က ဘိလပ်က မဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်ကပါ။ ဒီကိုမလာခင်ကတည်းက ရိုက်ခဲ့တာ။ အပေါ်က အုပ်မိုးနေတဲ့ ကံ့ကော်ပင်ကို ပြချင်တာ အမရေ ... ။
တကယ်တော့ ဒီပို့စ်မှာ ဆိုလိုချင်တာက မြန်မာဆိုတာ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ့်ဓလေ့ထုံးစံတွေမှာသာ ပျော်မွေ့ပြီး ကိုယ့်ရေမြေကို ခင်တွယ်၊ ကိုယ့်ဒေသက ပန်းတွေကိုသာ ပိုပြီး နှစ်သက်၊ ကိုယ့်ရိုးရာ ကဗျာစာပေကို ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတတ်တယ် ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။
ဒီ့ပြင်လူတော့ မသိဘူး။ ကျမကတော့ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ။
3/13/2011 6:59 AM
Botanic Garden has many ကံ့ကျော​ပငျ in Singapore. They are not tall and has very big flowers. You can hold branches and smell it. Sadly it's not allow to pluck.
3/13/2011 8:18 AM
ကျောင်းဖွင့်ချိန် စိန်ပန်းတွေလဲ မြေမှာကြဲပြန့်နေ ကံ့ကော်ပန်းတွေနဲ့ အတူ သူနဲ့ တွေ့ရာနယ်မြေ တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် မြကျွန်းသာအင်းယားကန်နယ်မြေ...
သီချင်းလေးဆိုပြီး ကော်မန့်ကို ရေးချလိုက်ပါတယ်..း)
မြကျွန်းသာထဲက ကံကော်ပန်းတွေကို ၀တ်ဆံလေးတွေ အခြောက်ခံပြီး လက်ဆောင်ပေးသူကြောင့် သနပ်ခါးလေးနဲ့ မွှေးမြစွာ သွေးလိမ်းခဲ့ဖူးတယ်..
ခုတော့ အဲဒီရနံ့လေးတွေ ပြန်မရတော့ဘူး...
မမေရဲ့ ကံ့ကော်တွေမြင်တော့ ပြန်သတိရလိုက်မိသား..
တရားခံ မမေ .............း)
3/13/2011 8:42 AM
ပန်းလည်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ကျနော်တော့ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း ပိတောက်ပန်းတွေ ပွင့်နေတဲ့ ပိတောက်ပင်ကို အမြဲ မြင်ချင်နေတတ်တယ်။
ဖိနှိပ်ထားရတဲ့ အိမ်လွမ်းနာကို သင်္ကြန်အငွေ့နဲ့ ပုတ်နိုးခံရတာမျိုးနဲ့တူပါရဲ့။
မမေ ကံ့ကော်ရွှေပြည်ကို လွမ်းနေတာ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။
3/13/2011 10:28 AM
ဟုတ်တယ်နော် ကံ့ကော်ရဲ့ ၇နံကို လူကိုတော်တော်ကြည်နူးစေတယ် ကျနော် ကျောင်းတက်တုန်းက ကျောင်းပရ၀ုဒ်အစပ်တွေမှာ ကံ့ကော်ပင်အကြီးကြီးတွေ အများကြီးပဲ ပွင့်တဲ့အချိန်ကျ မွှေ့းလိုက်တာများဗျာ နှင်းရေလေး မိုးရေလေးများ သောက်လိုက်ရလို့ကတော့ လှချက်တော့ ပြောမနေနဲ့ ကံကော်ရွက် နုနုနီနီလေးတွေလည်းလှတာပဲ ကားလမ်းဘေးဆိုတော့ ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေက ကံ့ကော်ပန်းတွေကို ငေးမော သဘောကျသွားရင် ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး ဂုဏ်ယူသလိုလိုနဲ့ပျော်တယ် လွမ်းမိပါရဲ့ ကံ့ကော်ရယ် ။
3/13/2011 10:51 AM
ကံကော်တွေကို ကောင်းကောင်း မသိခဲ့ပေမယ့် အခုလို ဆိုတော့လည်း လွမ်းချင်မိသလိုလို....၊ ကျနော် သဘောကျတာက ဝက်ဘ်ကမ်က ရိုက်ထားတဲ့ ကံကော် ပုံလေးတွေ..၊ မှုန်ဝါးဝါးပေမယ့် သူတို့ကို တစုံတယောက်က ဘယ်လောက်များ တမ်းတမ်းတတ နဲ့​ရိုက်ထားခဲ့သလဲဆိုတာ ပေါ်လွင်တယ်..။ :)
ဇာလီပျော်တဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်းက ဝင်္ကဘာတောထဲမှာ..
ဓါဝီပျော်တဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်းက အင်္ဂလန်မှာ...
ဗာဗီ..အဲလေ..ဗီဗာ ..ပျော်တဲ့ ကျောင်းသင်္ခမ်းက ...သီချင်းဆိုကပြီး ဗီဒီယို ရိုက်လို့ရတယ်
အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က ၀ထ္ထုတွေ စဖတ်ဖြစ်တော့ ဆရာငြိမ်းကျော်ရဲ့ ၀ထ္ထုတွေကို တရှိုက်မက်မက်ဖတ်ရင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပရ၀ုဏ်ထဲက ကံကော်တန်း၊ သစ်ပုတ်ပင်၊ ဦးချစ်ဆိုင် ဆိုတဲ့ အထင်ကရနေရာတွေကို စိတ်ကူးနဲ့မြင်ကြည့်ရင်း ရင်တွေခုန်ခဲ့ဖူးပါတယ်...ဆယ်တန်းအောင်ရင် ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့ပေမယ့် အညာသားဖြစ်နေတော့ မန္တလေးမှာပဲ တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်...မန္တလေးဝ/သ ၀န်းထဲမှာလဲ ကံ့ကော်ပင်က ခပ်ရှားရှားဆိုတော့ သွားကြည့်ပေမယ့်လည်း ရင်သိပ်မခုန်ခဲ့ရပါ...ကိုယ်တက်ခဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်းကလည်း ကျောင်းဝန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ သစ်ပင်ဆိုလို့ သုံးလေးပင်သာ ရှိတာဖြစ်လို့ ရင်ထဲက ကံ့ကော်အစွဲကို အာသာပြေအောင် မစွမ်းခဲ့ပြန်ပါ...ရန်ကုန်ကို အလည်သွားတော့လည်း တက္ကသိုလ်နယ်မြေကို မရောက်ဖြစ်ပြန်တာမို့ ကံ့ကော်ရဲ့လွမ်းမောစရာ ရသကို မခံစားခဲ့ရပြန်ပါ...ဒီနှစ်စာမေးပွဲပြီးလို့ ခရီးထွက်ရင်တော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲဝင်ပြီး ကံ့ကော်ရနံ့ကို အားရအောင်ရှူဖို့ စိတ်ကူးထားမိပါတယ်...အစ်မဘလော့ထဲက ကံ့ကော်တွေကို ပြန်မြင်ရတော့ ခပ်ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာငြိမ်းကျော်ရဲ့ ၀တ္တုတွေထဲက ဇာတ်ကောင်တွေကို ပြန်လွမ်းမိပါသေးရဲ့ အစ်မရေ...
3/13/2011 12:02 PM
ကျော်ခွမရလို့ ပို့စ်အသစ်လေးတောင် ဒီနေ့မှ လာဖတ်ရတာ ကံကော်တွေပွင့်နေတာကြာပေါ့နော
ဒါပေမယ့် စစတို့စီတော့ ကံကော်က ရန်ကုန်လောက်မပေါဘူး မန်းမှာ တမာရနံ့တွေ သင်းပျံ့ကြိုင်လှိုင်နေပြီ လွမ်းမယ်ဆိုလဲ လွမ်းစရာပေါ့နော် စာဖတ်ပြီး လွမ်းသွားပြီ။
3/13/2011 2:32 PM
အိုးးးးး.. လွမ်းလိုက်တာ မမေရယ်
3/13/2011 4:09 PM
နွေဦးကံကော်တွေပေါ့၊ ကိုကြီးကျောက် ရေးထား
တဲ့ ကော်မန့်ဖတ်ပြီး ရီရတယ် ...
ကံ့ကော်ပန်းလေး မြင်လိုက်ရမှ အတိတ်က အရိပ်တွေက ထင်ဟပ်လာတယ်။ ညနေ ဆည်းဆာခင်းလေးတွေမှာပေါ့။ ကျနော်က ကံ့ကော်ပင်ပေါ်တက်ပြီး ကံ့ကော်ပွင့်လေးတွေကို ချွေချပေးခဲ့တယ်။ အလှပဆုံး ကံ့ကော်ပွင့်လေးတွေကိုမှ ရွေးပြီး ချွေချပေးလေ့ရှိခဲ့တယ်။ အပွင့်လှလှ ရနံ့မြမြ ငွါးငွါးစွင့်စွင့် ပွင့်နေတဲ့ ပွင့်ဖတ်အာအာကြီးတွေကိုမှ ရွေးပြီး ချွေချပေးလေ့ရှိခဲ့တယ်။ညနေခင်းလေးတွေမှာပေါ့။ အောက်က ကောက်တဲ့ သူကလဲ တမြတ်တနိုး ခပ်ဖွဖွလေး ကိုင်တွယ်ပြီး ကောက်ရှာပါတယ်။ ပွင့်ချပ်ပွင့်ဖတ်တွေ မပျက်ကြွေဖို့က အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီလို အဲဒီလိုနဲ့ ညနေခင်းလေး အတော်များများမှာ ကံ့ကော်ပွင့် တက်ခူးခဲ့ရတယ်။ ပြန်ပြောင်းတွေးကြည့်ရင်တော့ လွမ်းမောစရာကြီးပါဘဲ။ ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဘုရားတင်ဖို့ တက်ခူးတာပါဗျာ။ တလွဲ မတွေးပါနဲ့။ ဟဲ ဟဲ။
3/13/2011 5:40 PM
ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ နေရာပဲ ရောက်ရောက်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ခမ်းနားအောင် ကဗျာလင်္ကာတွေနဲ့ ဖွဲ့ဆိုထားထား ရင်ခုန်သံချင်း နီးစပ်မှသာ ခံစားချက်တွေ ထပ်တူ ညီမျှနိုင်မည် မဟုတ်လား။ ဟုတ်တာပေါ့မမရေ..
အလွမ်းပေါ် အလွမ်းဆင့်လို့ ခုလို သင်္ကြန် ချိန်ခါနိးတော့
သီချင်းသံ ကြားရင်တောင် ရင်တွေခုန်ပြိး လွမ်းနေရ တဲ့အဖြစ်။ မမစာလေး ဖတ်ရတော့ ပိုလွမ်းမိတယ်မမရေ။
မမေရေ စာတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရင် ကျန်တာခြင်းမတူဘူးနော်၊ ခုဖတ်လိုက်တာ ကံ့ကော်ပန်းရောင်းပြီး ရတဲ့ပိုက်ဆံကို ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်တယ်၊ သာဓုပါကွယ်၊ သာဓုပါ။ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ကျရင် ကံ့ကော်ပင်အောက်မှာ ဘုရားဖြစ်မယ်။ သင်္ကန်းလှူရတဲ့ အကျိုးအားကြောင့် အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ကို ဖူးတွေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
ကံကော်ပန်းဆိုလို့ သာသနာ့တက္ကသိုလ် ကမ္ဘာအေးမှာတက်တုန်းကပေါ့ တစ်ခုသော မနက်မှာ ဘုရားပန်းကပ်ဖို့ဆိုပြီး အပင်ပေါ်တက်ခူးတာ ခူးနေစဉ်မှာပဲ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်က လာတွေ့သွားလို့ ဆင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ အပင်ကျိုးသွားမှာစိုးလို့တဲ့။ ကံ့ကော်ပန်းကို အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် မမေလို သတိတော့ မရမိဘူး။ မမေစာကို ဖတ်ပြီးမှပဲ သတိရတော့တယ်။ ကျေးဇူးနော်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
3/14/2011 12:39 PM